Mmemme Azụmaahịa: Otu esi akwụ ụgwọ ihe omume gị na - esote
M na a ogologo oge ofufe nke Hugh McLeod na nkà ya na gapingvoid ruo ọtụtụ, ọtụtụ afọ. Hugh bipụtara ngosi a n'oge na-adịbeghị anya maka ịbudata ihe omume gị. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa ihe omume kwenyere na ire ahịa gwụchara mgbe mmemme ahụ bidoro. Na ụbọchị ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta, agbanyeghị, ijikwa onyinye na ohere kwesịrị ekwesị iji mejupụta mmemme gị ga - eme ka ihe ịga nke ọma nke ihe omume gị - na ihe ndị ga - eme maka ọnwa na afọ ndị na - abịanụ.
Mgbe m gụrụ na ntanetị gbasara ahụmịhe nke ndị ọrụ ibe m na-enwe, enweghị m ike ịnagide ma ọ bụ na-enwe ntakịrị ịpụ. M na-eme ya oge iji hazie ịbịaru na mmemme ọzọ nke ndị mmadụ na ndị na-ahazi na-agbakọta. Ọ bụ ezie na ahịa gị maka ịga ihe omume ugbu a nwere ike ịkwụsị ozugbo ọnụ ụzọ mepere, mgbalị ị na-ere maka ihe omume na-esote amalitela!
Tags: mmemme ahiaiheMgbakọ Ahịaihe omume ahianzukọ ọmụmụihe omume ọchụchọnzukọ mgbasa ozi mmekọrịtaihe omume mgbasa ozi
Nov 13, 2012 na 10:38 PM
HI Douglas, daalụ maka ndụmọdụ a dị egwu. Agbanyeghị, achọrọ m ịmata na echere m na ọ kwesịrị ịkwadebe mgbe ịmalitere nnukwu nrọ gị. Anyị ga-echerịrị ya maka nkwadebe niile ị kpọtụrụ aha na post gị.